Apple inobhadhara vatungamiriri vaviri veSony kusimudzira vhidhiyo yayo zvemukati | Ndinobva mac
Apple inobhadhara vatungamiriri vaviri veSony kusimudzira vhidhiyo yayo zvemukati
Sezvo Apple yakaunza yavo yekumhanyisa mimhanzi papuratifomu anopfuura makore maviri apfuura, ivo vakomana veCupertino vakasimbisa kuti Apple Music yaisazove nzvimbo yekuteerera mimhanzi chete, asi yaizovewo nzvimbo iyo vashandisi vanogona zvakare kunakidzwa akasarudzika mavhidhiyo. Kubva payakatanga, Apple yakafamba zvishoma kupfuura zvaitarisirwa uye kusvika mazuva mashoma apfuura, yekutanga yakasarudzika yezvinhu yakagadzirwa neApple haina kuona mwenje. Iyo Planet yeApplication, yaive yekutanga show yakamborekodwa kutepfenyurwa paApple Music chete kune vese vanyoreri, asi handiyo chete.
Mumazuva mashoma, James Corden achatangisa kuratidzwa kweCarpool Karaoke, kubviswa uko James Corden achange asiri mumwe protagonist muhurukuro, nekuti haazomboonekwe kunze kwezviitiko zvisingawanzoitika. Uye ndizvozvo. Parizvino hapachina zvemukati zvakarongedzwa neApple muchimiro cheyakagutsikana zvemukati. Kuona kukwana uye matambudziko ari kutarisana neApple, vakomana vanobva kuCupertino vafunga kuita fkuhaya vatungamiriri vaviri veSony kuti vatange kutanga kuburitsa zvemukati zvemukati nenzira inokurumidza uye inoshanda.
Jamie Erlicht naZack Van Amburg ndivo vaviri vatungamiriri veSony vanozotaurira zvakananga kuMutevedzeri Wemutungamiriri wenyika Internet, Software neMabasa Eddy Cue. Pakati peimwe yebudiriro iyo vatungamiriri vaviri vakawana munyika yeterevhizheni yatinowana Kutyora Kwakashata, Kunopembedzwa uye Iyo Korona.
Aya maviri akasaina anongova chikamu chevakuru vakasaina kubva kune mamwe makambani kusimudzira yavo vhidhiyo chikuva. Iye zvino isu tinongofanirwa kugara uye kumirira kuti tione kana aya masayina achitanga kubereka michero uye Apple Music zvechokwadi inova chikuva pane iyo Apple inogona kuratidza zvemukati zvemukati, sezvakaziviswa makore maviri apfuura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Apple inobhadhara vatungamiriri vaviri veSony kusimudzira vhidhiyo yayo zvemukati
iFixit inopa Microsoft nyowani laptop iri 0. Zvese zvinhu zvinonamirwa uye zvakasungwa